Iindaba - Umboniso weVietnam
Ngomhla we-10 ku-Epreli, inkampani yethu yaya eVietnam ukuze ithathe inxaxheba kulo mboniso, ibonisa iimveliso eziphambili zenkampani yethu: Ilaphu leplastikhi, Indwangu yezamayeza, ilaphu lokwenza iimpahla, yanika abathengi umboniso weemveliso zenkampani kunye namandla eenkampani.
I-Hebei Ruimian Textile Co, Ltd lishishini elizimele labucala, elililo elenza umsebenzi wezambatho zelaphu, indwangu yelaphu kunye nelaphu lokupaka. Inkampani iyaluka, iyafa, ingenisa urhwebo lokuthengisa kunye nokuthumela kwelinye ilizwe iseti enye, sinezixhobo zemveliso zasekhaya nezikumgangatho ophezulu; Uninzi lweemveliso zithunyelwa kwelinye ilizwe e-United States, Japan, Europe, Korea, Australia, Southeast Asia, kwi-Middle East nakwamanye amazwe nakwimimandla.
Inkampani yethu ibonelela ngazo zonke iintlobo zelize ezingwevu, ilaphu elihlanganisiweyo, kunye nelaphu elicinyiweyo, ukuhlangabezana neemfuno zomthengi zelaphu elikhethekileyo elisebenzayo, njenge-anti-static, ukungangenisi kwamanzi, ubungqina obungaphantsi kunye nokunye.
Ukusukela ekusekweni kwenkampani ukusukela ngo-1995, inkampani yethu ifumana indumasi yomgangatho ophakamileyo yomgangatho wobungakanani bemveliso yokuqala kunye nenkqubo yolawulo esemgangathweni. Namhlanje abasebenzi eRuimian balandela umgaqo-nkqubo '' wobunye obunamandla obumangalisayo '', qhubekeka nokwenza izinto ezintsha, bathathe itekhnoloji njengeyona nto iphambili, esemgangathweni njengobomi, abathengi njengoThixo, kwaye banikezela ukukunika umgangatho ophezulu, isiphene kunye ezona mveliso zixabisekileyo zePot-Cotton.
Ixesha lokuposa: Jul-06-2020